गुल्मीका पालिकाहरुमा डोजरवाला जनप्रतिनिधी: हुने हो कि आफै धामी आफै बोक्सी ? – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/गुल्मीका पालिकाहरुमा डोजरवाला जनप्रतिनिधी: हुने हो कि आफै धामी आफै बोक्सी ?
गुल्मीका पालिकाहरुमा डोजरवाला जनप्रतिनिधी: हुने हो कि आफै धामी आफै बोक्सी ?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ जेष्ठ २७, आईतवार १६:३० मा प्रकाशित
गुल्मी , जेठ २७ । जिल्लाका कतिपय स्थानिय निकायका वडाध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधीहरु निर्माण ब्यवसायको पृष्ठभुमीबाट आएका ब्यक्तिहरु छन् ।
यसमा जनताको निकै चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । पालिकाहरुलाई आएको कार्यविधी अनुसार उपप्रमुख गाउँपालिकाको तर्फबाट अनुगम समितिको अध्यक्ष रहने र वडाध्यक्षहरु वडा स्तरको विकास निर्माणमा अनुगमन समितिको अध्यक्ष रहने ब्यवस्था छ ।
यसर्थ उ आफै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष डोजर सञ्चालक, उ आफै अनुगमन समितिको अध्यक्ष हुँदा कतै अनियमितता बढ्ने हो कि भन्ने आशंका स्थानियवासीले गर्नु स्वभाविक हुन आउँछ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बुझ्दा कतिपयमा यस्तो प्रवृत्ती देखा परेको पनि बताईएको छ ।
ईस्मा गाउँपालिका पनि यस्तै चिन्ता र चासो रहेको सर्वसाधरणहरु बताउँछन् । तर गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टसंग सम्पर्क राख्दा उनले यस विषयमा पालिकाले गम्भीर रुपले निगरानी बढाएको बताए । ‘हामीले त्यस्तो हुनै दिदैनौं, प्रत्यक्ष रुपमा हामीले त्यस्तो पाएका छैनौ’, उनले भने, ‘अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै जनप्रतिनिधीहरु डोजर सञ्चालनमा संग्लग्न रहेको नरहेको कुरामा हामी थप निगरानी बढाउने छौं ।’
मालिका गाउँपालिका प्रमुख रितबहादुर थापाले आफुले त्यस्तो प्रत्यक्ष रुपमा नदेखेको बताए । उनले भने, ‘वडाहरुको वाटो खन्द मिलेर डोजर चलाएको भए थाह भएन, यदि त्यस्तो पाईए कार्वाही गरिने छ ।’ उता रुरु गाउँपालिका प्रमुख नीलकण्ठ गौतमले एकाध त्यस्तो पाईए पनि अनियमितता हुनबाट रोकेको बताए । उनले भने, ‘डोजरसंग जोडिएका जनप्रतिनीधी हुँदै नभएका त न होलान् तर हामीकहाँ त्यस्तो पाईएको छैन ।”
चन्द्रकोट गाउँपालिका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले एकाध वडामा वडाध्यक्ष डोजर सञ्चालन कारोवारसंग जोडिएको बताए । उनले आफुहरुले त्यस तर्फ निगरानी बढाएको जानकारी दिए । सत्यवती गाउँपालिका प्रमुख पारिश्वर ढकालले यो विषय आफुले भन्नु भन्दा पत्रकारहरुले आफै खोजेर सञ्चार माध्यममा ल्याई दिए धेरै राम्रो हुने बताए । उनले भने, ‘मैले यो वा त्यो जनप्रतिनिधी संग्लग्न छ भन्दा राम्रो हुँदैन तपाईहरुले नै खोजरे बाहिर ल्याई दिए राम्रो हुने थियो ।’
यस विषयमा त्यस गाउँपालिका प्रमुख वेदबहादुर थापा, गुल्मी दवरवारका अध्यक्ष अशोककुमार थापा र मदाने गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसीको प्रतिकृया माग्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । मुसिकोट नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले त्यहाँका ९ वटै वडाका जनप्रतिनिधीहरु डोजर सञ्चालनमा नजोडिएको दावी गरे । उनले भने, ‘हामी त्यस्तो कतै केहि पाएका छैनौं, अप्रत्यक्ष रुपमा कोही लागेको भए हामी त्यसलाई तुरुन्तै रोक्छौं । ’
रेसुङ्गा नगरपालिका भित्र ३ वडामा प्रत्यक्ष रुपमा निर्माण ब्यवसायको क्षेत्रमा लागेको तिन वटा वडाध्यक्ष देखिन्छन् । वडा नम्वर ८ का आध्यक्ष भरत भलामी, वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष मोहनप्रसाद पाण्डे र वडा नम्वर १२ का कुलबहादुर टण्डन पहिल्लै देखिका निर्माण ब्यवसायीहरु हुन । टण्डनको भने आफ्नै डोजर छैन ठेक्का मात्रै लिन्छन् ।
वडाध्यक्ष भलामी भन्छन्, ‘आफ्नै वडामा डोजर चलाईएको छैन, अन्यत्र काम गरेर खान त पाउनु प¥यो नि ।” उनले स्पष्ट पार्दै थपे, ‘ हो म त पहिल्लै देखिको निर्माण ब्यवसायी हुँ । हरेक ब्यवसायीलाई जस्तै यो भन्दा अरु ठुला मेशिन हालुँ, अरु बढि कमाउँ जस्तो लाग्छ त्यस्तै मलाई पनि लाग्छ । मैले जनप्रतिनिधीहरुको कुर्चिमा कहाँ गल्ती गरे त्यो मात्रै औलाई दिए पुग्छ । ’
७ का वडाध्यक्ष पाण्डेले आफुले आफ्नो वडामा कतै पनि दवाव दिएर आफ्नो डोजर नचलाएको बताए । सिस्न्यारको बाटोमा ५ लाख परेको हो, त्यसमा हरिकुमार श्रेष्ठको मेशिन चल्यो । अर्को ७ लाखको बाटोमा पनि श्रेष्ठ र खडानन्द पाण्डेयले खनेका छन् । एउटा अर्जुन डाँडा तर्फको बाटोमा भने उपभोक्ता समितिले डोजर पाएनौ भनेर कर गरे पछि मेरो डोजर चलाईएको हो । २२ लाख रकम मध्ये त्यसमा मैले ४ लाखको मात्रै डोजर चलाएको छु ,–उनले भने ।
रेसुङ्गा नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालको यस विषयमा ध्यानकृष्ट गराउँदा उनले भने, ‘ओहो, कुरा त सहि उठाउनु भयो, मैले यस विषष्यामा ख्याल गरेको रहेन छु । उनले थपे–‘ हो त नि उहि वडाध्यक्ष अनि स्वतः वडामा उ आफै अनुगमन समितिका अध्यक्ष र उ नै डोजर सञ्चालक छ भने त यसवारे ख्याल गर्नै प¥यो , अव गर्छु ।’
श्रोतको अनुसार डोजर सञ्चालक र ठेक्का पट्टामा संलग्नहरुलाई अहिले जनप्रतिनिधीहरु भई सके पछि काम पाउन निकै सजिलो भएको छ । आफ्नोमा उसको, उसकहाँ आफ्नो । ठेक्का पट्टाको सुचना आदान प्रदानमा पनि निकै सजिलो हुँदै गएको छ ।